Padre Pio: nnwere onwe, ọrụ maka ndị ogbenye | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Ivana Virginillo - Eprel 8, 2021
Ọ bụ na Jenụwarị 1940 mgbe Padre Pio kwuru maka oge mbụ banyere oru ngo ya nke ịchọta na San Giovanni Rotondo nnukwu ụlọ ọgwụ iji gwọọ ndị ọrịa nọ na mkpa. Ebe ahu echefuru ebe nile achoro acho obi ebere iji nyere ndi ogbenye aka.
Ihe gbara ha gburugburu ọ dịghị ihe ọzọ ma ọ bụ nhụsianya, mwute na ịhapụ. Enweghị ụlọ ọgwụ, enweghị ụlọ maka ndị na-adịghị ike, ọ nweghị ihe ga - enyere aka ịtachi obi ọnya nke nhụsianya miri emi. Ọbụna obere ụlọ ahụ ike na-ebi na ebe obibi ndị nọn nke ndị Poor Clares ndị ogbenye ebibi na ala ọma jijiji 1938.
Ọchịchọ Padre Pio ghọrọ eziokwu
Na nke ya nrọ ụlọ ọgwụ ọhụrụ ahụ kwesịrị ịbụ ebe maka elekọta nke ahu kamakwa maka nke nkpuru obi. Iji gwọọ nmehie ọ na-ewe fede ma iji gwọọ ahụ ịchọrọ ezigbo ndị dọkịta na ebe nnabata, nke a bụ echiche ya.
Hospitallọọgwụ ọ chọrọ aha Forlọ maka Enyemaka nke Ahụhụ ọ kwesịrị ibili n'akụkụ ya chiesa. Enwere ọtụtụ miracoli na Padre Pio mere mana nke kachasị nke na ọ dịka ọ gaghị ekwe omume nye mmadụ niile ka emezuru dịka ọ rọrọ na ya. Mgbe afọ abụọ gasịrị, n'eziokwu, a mụrụ kọmitii ụlọ ọgwụ maka ndị ogbenye, ndị na-ata ahụhụ na ndị a chụpụrụ n'ụlọ.
N'ime afọ ndị sochirinụ, e welitere nnukwu ego. Na onyinye ha si n’akụkụ ụwa niile. Emepere ụlọ ọgwụ a na May 5, 1956 n'ihu ọtụtụ ndị ọchịchị mpaghara. O doro anya na ọ dịghị ụkọ nkatọ nke ndị iro ya. Eeh ọ baara mba imefu oge, iji wuo okomoko okomoko. Otutu marble na ihe di oke onu nke mere ihe owuwu a dika nnukwu otele karia ebe ogwu.
Dabere na Padre Pio nke ahụ ga-abụrịrị ụlọ ebe, n'ihu ahụhụ na Jesus,, ha niile bụ otu: ọgaranya na ogbenye, nwata na okenye. N’oge na-adịghị anya, ụlọ ọgwụ ahụ bịara nwee ndị dọkịta maara ihe ma nyefee ọrụ ha n'efu ma jisie ike kwadebe onwe ya na ihe ndị kasị oge a na teknụzụ maka elekọta nke ndị ọrịa. Taa, mgbe ọtụtụ afọ gasịrị, ihe owuwu ahụ na-aga n'ihu na-eto n'ihi na akwa ndị ahụ ezughi oke mgbe niile n'ihi nnabata ndị ọrịa na-aga n'ihu na Italy dum.